यिनै हुन् जसलाई मिल्यो गुगोल बाट ६० लाखको प्याकेज, आखिर के काम गर्छिन यी युवती ? – Sunaulo Nepal TV
संसारको सबैभन्दा ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी गुगलले उनलाई जागिरको प्रस्ताव राखेको छ। यो केटी भागलपुर जिल्ला को सुल्तानगंज मा बस्छिन्, उनको नाम शालिनी झा हो।
शालिनीका हजुरबुबा मुरारका कलेजको रसायन शास्त्र विभागका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। प्रो उमेश्वर झा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, जबकि उनका पिता का नाम कामेश्वर झा हो। शालिनी झा हाल दिल्ली मा बस्दै आएकी छिन् । केहि दिनहरुमा उनी भागलपुर, सहरसा र मधेपुरा आउनेछिन्, तब मात्र उनी गुगल मा जोईन हुनेछिन।
उनी गुगल जोइन संगै आफ्नो पढाई जारी राखिन । अर्कोतर्फ, गुगलले शालिनीलाई सफ्टवेयर इन्जिनियरको रूपमा काम गर्ने अवसर दिएको छ। शालिनी भागलपुर जिल्लाकी पहिलो छोरी हुन् जो गुगलमा छनोट भईन्। शालिनी मात्र २१ बर्षकी छिन्, र उनी गुगलले ६० लाख रुपैयाँको वार्षिक प्याकेजको अवसर पाएका छन्।
रिपोर्टका अनुसार शालिनी आफ्ना बुबालाई प्रेरणा मान्छिन्। उनका बुबा भन्छन् कि शिक्षा एक तपस्या हो, जसले यो तपस्या पूर्ण भक्ति र एकाग्रता संग गरेको छ, उनी जीवनको दोस्रो चरणमा खुशी र सन्तुष्ट हुनेछन्।
शालिनीले भनिन् कि उनकी आमा, बहिनी र भाइले हरेक पाइलामा उनीमाथि विश्वास राखेका छन्। यति मात्र होइन, उनी भन्छिन्, उनकी हजुरआमाको माया र आशीर्वादले उनलाई यहाँसम्म ल्याएको छ, हजुरआमा सधैं उनीलाई भन्थिन् कि छोरा तिमीले केही देखाउनु पर्छ।
शालिनीका काकाले भने कि शालिनी हाल इन्दिरा गान्धी दिल्ली टेक्निकल युनिभर्सिटी फर वुमन बाट इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन ईन्जिनियरिमा आफ्नो अन्तिम बर्ष पछ्याइरहेकी छिन्।
यो धेरै गौरव र खुशी को कुरा हो कि अंग क्षेत्र को यो छोरी आफ्नो असाधारण प्रतिभा र कडा मेहनत को बल मा यति कम उमेर मा ठूलो उपलब्धि हासिल गरीएको छ, र परिवार संगै जिल्ला को नाम ल्याएको छ।
शालिनी झाले भनिन् कि उनलाई अष्ट्रेलियन सफ्टवेयर कम्पनी एटलसियन बाट कलेज बाट क्याम्पस मा प्लेसमेन्ट ड्राइभ को लागी एउटा अफर पनि प्राप्त भएको थियो, त्यो पनि ५१.५ लाख को प्याकेज को लागी। त्यस पछि उनले डाटा भण्डारण कम्पनी वेस्टर्न डिजिटल संग दुई महिना को इंटर्नशिप गरे, जस पछि उनी एक पूर्व नियुक्ति प्रस्ताव पाए। तर शालिनीले गुगलमा अफ-क्याम्पस प्रयासको लागी आवेदन दिईन् र अन्तर्वार्ता को सात राउन्ड पछि, उनी सफ्टवेयर ईन्जिनियर को पद को लागी चुनिएकी थिइन्, जसमा उनी लाई ६० लाख रुपैयाँ वार्षिक प्याकेज को प्रस्ताव आयो।
शालिनीले भनिन्, अब उनी आफ्नो पढाई पूरा गर्छिन्, त्यस पछि उनी एक सफ्टवेयर ईन्जिनियरको रूपमा गुगलमा सामेल हुनेछन्। पढाई बाहेक, शालिनी क्रिकेट हेर्न पनि मन पराउँछिन्, त्यति मात्र होइन, उनी ब्याडमिन्टन र चेस खेल्न पनि मन पराउँछन्। उनी विश्वास गर्छिन् कि केवल आठ देखि १० घण्टा सम्म अध्ययन गरेर केहि पनि गाह्रो छैन। यो मात्र होइन, उहाँ गीता र रामचरितमानस पढ्नमा धेरै रुचि राख्छिन ।
Previous जब ‘भाइरल रोड’ हेर्न प्रधानमन्त्री देउवा पुगे….
Next अरबपति बिल गेट्सकी छोरीले मुस्लिमसंग बिहे गरेपछी बुवा बिल गेट्सले लेखे यस्तो मन छुने स्टाटस